ဘေဘီလေးတို့ ပီကေ စားလို့ရလား ......... - Hello Sayarwon
ပီကေလေး ဝါးချင်လို့ ဘူးလေး ဖွင့်တုန်း ရှိသေးတယ်။ ဘေးနားကို ရောက်လာတဲ့ ဘေဘီလေးက လေးလေး သားသားလည်း စားမယ်လို့ ပြောရင် ဘေဘီလေးတို့ ပီကေ စားလို့ရလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေက မကျွေးရဘူးဆိုတာ သိနေတာကြောင့် ကလေးတွေ စားလို့မရဘူး လူကြီးတွေပဲ စားလို့ရတာလို့ ပြောလိုက်ပေမယ့် ဘေဘီလေးက ဘယ်တော့မှ စားလို့ရမှာလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဘာဖြေလို့ ဖြေရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေတဲ့ လေးလေးတွေ တီတီတွေ ရှိလား…..
ဒါဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးရဲ့ အဖြေကို ဖြေနိုင်ဖို့အတွက် လေးလေးတို့ တီတီတို့ရေ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
ဘေဘီလေးတို့ ပီကေ စားလို့ရလား ………
ဘေဘီလေးတို့ ပီကေစားလို့ရလား ဆိုတော့ No ပါ။ ပီကေဆိုတာက ဘေဘီလေးနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ စားစရာ တစ်မျိုးပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ ဘေဘီလေးကို မကျွေးမိဖို့အတွက် သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ပီကေလေးတွေက ပူဖောင်းလေးတွေ မှုတ်လို့ရတာကြောင့်ရော အသွင်အပြင်လေးတွေကြောင့်ပါ ကလေးတွေက စိတ်ဝင်စားတာပါ။
ဒါပေမယ့် ပီကေက လူကြီးတွေတောင် အခန့်မသင့်ရင် မျိုချမိနိုင်တာကြောင့် ငယ်ရွယ်လွန်းတဲ့ ဘေဘီလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်များတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါ။
ပီကေစားတာက ဘေဘီလေးကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေနိုင်လဲ ….
ပီကေက သွားနဲ့ ခံတွင်းကို ကျန်းမာစေတယ်ဆိုပေမယ့် အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှု မရှိသလို ဘေဘီလေးတွေကိုလည်း အခုလို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်
ပါးစပ်ထဲမှာ အနာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ပီကေ စကျွေးလို့ရလဲ…..
ဘေဘီလေးကို အရမ်းငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ပီကေ မကျွေးရဘူးဆိုပေမယ့် ဘေဘီလေးက အသက် ၅ နှစ် ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ ပီကေ စကျွေးလို့ ရပါပြီ။ ဒီလို ကျွေးတဲ့အခါမှာလည်း ဘေဘီလေးကို မျိုမချမိစေဖို့ သေချာလေး သတိပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးကို ပီကေကျွေးတဲ့အခါ သကြား မပါတာ၊ artificial sugar မပါတာတွေကို သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါမှ သွားပိုးစားတာ သွားပျက်စီးတာတွေ မဖြစ်မှာပါ။
ဘေဘီလေးကို ပီကေကျွေးတဲ့အခါ တစ်ခုလုံး မကျွေးဘဲ နည်းနည်းလေး ဖဲ့ကျွေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ဘေဘီလေးကို ပီကေကျွေးတဲ့အခါ မိနစ် ၂၀ ထက် ပိုမဝါးစေဖို့ ဂရုစိုက်ပေးပါ။ လေထတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ပါ။
ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် ရရှိထားတာမျိုး၊ ကလေးတွေအတွက် သီးသန့် ထုတ်ထားတာမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။
ဘေဘီလေးကို ညစာ စားပြီးချိန်မှသာ ပီကေကျွေးပါ။
အစာမရှိဘဲ ပီကေကျွေးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
သေချာ ထွေးထုတ်ဖို့ သတိပေးပါ။
ကဲ… ဘေဘီလေးက ပီကေ စားချင်လို့တောင်းရင် လူကြီးဖြစ်လာရင် စားလို့ရပြီဆိုတာမျိုးထက် အသက် ၅ နှစ်ပြည့်ရင် နည်းနည်းတော့ စားလို့ရပြီ ခုတော့ မစားနဲ့ဦးနော်ဆို​ပြီး ဘေဘီလေးကို တိတိကျကျ အဖြေပေးလိုက်ပါ တီတီ လေးလေးတို့ရေ
Is It Okay for My Kids to Chew Gum? https://welovebrightsmiles.com/blog/okay-kids-chew-gum/ Accessed Date 27 September 2021
ပီကေဝါးရင်း မျိုချမိရင် အန္တရာယ်ရှိလား